Aprimo | Lahatsary Tech Tech
Aprimo: Lahatsary Tech Tech
Alakamisy Janoary 27, 2011 Alakamisy, Jona 18, 2015 Douglas Karr
Faly be izahay fa hanangana hetsika vaovao miaraka amin'ny Newslettern Technology Marketing sy ny Fampisehoana Radio Technology Marketing… Izahay koa mandefa andian-dahatsary Teknolojia Marketing!
Nampiantrano sy novokarin'i Media amin'ny kintana 12, hampahafantatra anao amin'ireo orinasa teknolojia marketing sy olona ao ambadiky ny vokatra sy serivisy ity andiany ity! Ny voalohany amin'ny andiantsika dia Aprimo, orinasam-barotra mandeha amin'ny varotra miaraka amin'i fitaovana manokana be pitsiny indrindra ho an'ny mpivarotra.
Eto Indianapolis dia manana orinasa maromaro efa milahatra amina horonantsary izahay. Aza matahotra anefa! Raha tsy eo afovoan'i Indiana ny orinasanao momba ny haitao marketing, dia ho azonao ny sary avy aminao ary 12 Stars Media no hampifangaro ilay horonantsary. Ataovy ao an-tsaina, mazava ho azy, fa efa lava ny lisitry ny fiandrasana ary misy ny vidiny hanaovana ny horonan-tsary.
Mifandraisa aminay raha tianao ny manaraka! Misaotra manokana an'i Rocky sy Zach avy Media amin'ny kintana 12 ho an'ny asa lehibe toy izany.
Aza manara-maso: Inona no mila fantatry ny mpivarotra